Glossy nhema iPhone 7 inomhanya mumatambudziko ekugadzira | IPhone nhau
Glossy nhema iPhone 7 inosangana nematambudziko ekugadzira uye ichauya kune inodonha
Hapana fungidziro. Imwe yenguva dzenyeredzi yeshoko rakakosha munaGunyana 7 yaive nguva yavakaburitsa iPhone 7 muvara ravakadaidza kuti Jet Nhema. Kubva iyo iPhone 5s, Apple yakanganwa kuvhura matema matemu nekuti ivo vaiwanzo tenderera kukanda kana abrasions, saka isu tanga tisina kuve nerima dema modhi kubvira 2012. Asi izvo zvachinja gore rino ne iPhone 7 inopenya nhema, Ruvara runodiwa nevazhinji vashandisi.
Sezvatinoverenga pane yayo yepamutemo webhusaiti, «Iyo iPhone 7's gloss nhema kupedzisa mhedzisiro yeanochenjera mapfumbamwe-nhanho anodizing uye polishing maitiro«, Izvo, pakutanga, zvinoreva kuti ivo vanofanirwa kungwarira zvakanyanya neruvara kupfuura pane mamwe mana mairi maPhones matsva anowanikwa. Zvakawanda zvekuti sekureva kwemukurumbira weKGI muongorori Ming-Chi Kuo, Apple iri kuve nayo matambudziko ekugadzira izvo zvinoita kuti iyo iPhone 7 uye 7 Plus mune gloss nhema ruvara inosvika zvishoma zvishoma kupfuura iyo yese.
30-40% ye glossy nhema iPhone 7 haina kupfuura Apple mhando kutonga
Sekureva kwemuongorori weKGI, iPhone 7s mune yakasviba nhema ine nguva yakanyanya kuoma kupfuudza mhando yeApple kutonga uye 30-40% inofanirwa kupfuura neanodizing uye kupora maitiro zvakare iyo Apple inotaura nezvayo pane yayo yepamutemo webhusaiti. Izvi zvaizoreva kuti nepo 10 iPhone 7s mune matte nhema yakagadzirira kutumirwa, chete 6-7 iPhone 7s mune inopenya nhema inogona kugadzirirwa.
Chimwe chikonzero icho Kuo anopa chekushomeka kweiyo Jet Nhema mamodheru ndeyekuti iyo iPhone 7 yakapfuura zvese zvinotarisirwa, chimwe chinhu icho zvakare ingadai yakabatsira kudambudziko reGlass Note 7 nemabhatiri ayo kukanganisa.
Kana iwe ukandibvumidza ini tip, ini ndaikurudzira kuti ndisapofomadzwa nekupenya kweiyo nyowani ruvara uye kutenga iyo modhi mune matte nhema. Icho chinhu chandakaita ini pachangu: mazuva mana mushure mekuchengetera iyo iPhone 4 Plus mune inopenya nhema, ndakademba kuverenga zvirevo zvevanhu vanga vatozviedza (mumwe wedu Pablo Ortega pakati pevamwe), ndakazvikanzura, ndakaraira zvakafanana modhi mumatte matema uye, kunyangwe kuichengetera mazuva mana gare gare, ichiri kundipa ipfupi nguva yekuendesa. Kana iwe ukanditeerera, iwe unogona kuve yako iPhone 7 nekukurumidza uye uchinakirwa nayo pasina zvakawanda zvinonetsa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Glossy nhema iPhone 7 inosangana nematambudziko ekugadzira uye ichauya kune inodonha
Zvakanaka, kana avo vanosvika vari 60-70% pane kana vakapasa kutonga ... maawa makumi matatu nematatu jet dema rakandibata. Handina kuzvitsaurira pakuita bvunzo dzekupikisa, ndakangozvitakura muhomwe mangu uye ndakaedza kesi nebheteri rekuwedzera randiinaro.
Dambudziko harisi rekuti vanokwenya, ndechekuti vanoonekwa zvakanyanya. Iyo imwecheteyo kesi, pane yegoridhe iPhone 6 yakasiya mamaki, iyo pandakangoziva kuti ivo varipi nekuda kweiyo 7, ini yandakawana. Ivo vashoma. Mune ese matanhatu, sirivheri nepingi zvakateerana, hapana mamaki.
Asi mune jet nhema vanoimba zvakanyanya zvekuti kekutanga, uye kana iwe uri maniac nezve kutarisira zvishandiso zvako, seni, zvirinani sarudza rumwe ruvara.
Izvo zvakashata, ikozvino kuona kana paine stock yematte nhema muStore, nekuti ini handizive kana ndichave nemoyo murefu wekumirira kuti itumirwe kwandiri pawebhu.
Hongu, ndinowedzera. Ruvara rwacho runoshamisa, rune kubata kunoshamisa uye neruvara, runako kwazvo mumakore. Isina kukodzera kuvanzwa mune ruoko, saka kunaka kwayo kukuru ndiko kushaya simba kwazvo.
Wakamboedza kuzvidzivirira ne lacquer?.
Ndine izvi seizvi uye hazviratidze, ndiko kuti kana ndiri nyanzvi yekupenda
Uye bye garandi…. Ini handizive kana zvakakodzera lacarlo….
Oo zvangu, kukutengera 1000 mbichana foni yekuisa varnish pairi? Zvisinei… ..
Zvirinani tenga mumwe ruvara kana iwe uchiziva kuti uyu ari kuzokwenya padiki
Apple kuzivisa Q4 2016 mhedzisiro yemari muna Gumiguru 27
Matambudziko matsva eiyo Samsung Galaxy Note 7